Foara Boeny Mionjo: Fahombiazana tanteraka ny andiany faha efatra
mercredi, 23 août 2017 22:48
Mahatratra 140 trano heva mandray anjara amin'ny varotra fampiratiana amin'ny foara Boeny Mionjo andiany faha 4, izay atao manoloana ny Tranoben'ny varotra sy ny indostria eny amin'ny Bord de la mer.
Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna izany ary tsy hifarana raha tsy ny 26 aogositra 2017. Lohahevitra tamin'ity andiany ity moa ny hoe : "Ny jono sy ny fiompiana harena anaty rano fanoitra ho an'ny fampandrosoana ny faritra Boeny".
Mampiavaka ny foara tamin'ny taona ity ihany koa ny fahatongavan'ny solontenan'ny Sekretera jeneralin'ny COMESA sy ny depatemantan'i Mayotte , izay tena nanamafy ny fiaraha-miasany amin'ny faritra Boeny eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana ara-barotra.
Mpitsidika hatrany amin'ny 50.000 no andrasana mandritra ny efatra andro hanaovana ny foara aty Mahajanga. Tena tanjona amin'ny foara moa ny fifanakalozana sy fifampizarana traikefa amin'ny samy tantsaha, ahafahana mampahafantatra ny vokatry ny faritra mba ahitana lalam-barotra ho fampandrosoana ireo tantsaha sy ny faritra misy azy.